Iimpawu ezahlukileyo Stainless - China Richina
Iimpawu ezahlukileyo Stainless
Richina eneemfuno ezizodwa zonke iintlobo Stainless Garden Tools, Ke abathengi abaninzi sihlolisise oko uhlobo insimbi zisetyenziswa ezi Izixhobo Garden, Zeziphi iimpawu ezahlukeneyo steel stainless?
Asingabo bonke steel stainless na umgangatho ofanayo kunye nokwakheka. I-nickel ngaphezulu kwaye chrome ingxubevange sentsimbi esisiseko, nzima yaye zomelele ngakumbi na. Ngenxa yoko, kuyabiza kumatshini kunye Polish. flatware steel stainless lwenziwe kwenye aluminium ezininzi ezahlukeneyo. I-aluminiyamu ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ezi 304, 410, 420 no 430.
Ukongeza ngentsimbi, ingxubevange 304 iqulethe ayasiqinisekisa-18% chrome kunye ayenechaphothi ethambileyo ka-8% nickel. Le Umnxybe owayesisityebi chrome kunye nickel ibonelela namhlwa ubuninzi kunye nokukhuselwa umhlwa. 18/8 stainless uthathwa kakhulu kakhulu kwaye lufumaneka flatware intle insimbi. EYurophu, usetyenziswa 18/10 ukwakheka, nto leyo ilingana US eqhelekileyo 18/8.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼The ingxubevange 430 iqulethe 18% chrome kunye akukho nickel. Kuqhuba indlela olunoqoqosho, 18/0 stainless unawo inkangeleko obukholekayo va-18% chrome, kwakunye okuhlala, ekugqibeleni eliphezulu Polish. Inika ukuxhathisa elihle ukuba nomhlwa umhlwa. ibamba 18/0 stainless ukuya ngokwentelekiso kakuhle commercial enzima kodwa ukunika ayenechaphothi ohlala 18/8.
410 ingxubevange steel stainless iqulethe 13% chrome kunye akukho nickel. 13/0 steel stainless inika ubuhle ngexabiso eqhelekileyo kodwa ke ukumelana ubuncinane ukuya ngokudleka ukurusa. Kufanelekile xa ixabiso le ingqalelo phezulu.
Izixhobo zethu Garden, kuquka Garden izixhobo Ukumba enkulu okanye Garden Hand Small Tools, zenziwe ka 420 ingxubevange,
Le-carbon omkhulu, 13% izinto chrome Lifanele blade kwanokwenza kunye iziphumo elidlula elibukhali.